छडको मूल्य बढ्यो, चार कोठे घर बनाउँदा कति लाग्छ खर्च? :: Setopati
छडको मूल्य बढ्यो, चार कोठे घर बनाउँदा कति लाग्छ खर्च? घर बनाउँदा कस्तो छड रोज्ने? किन्दा हेर्नैपर्ने कुरा के-के हुन्?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, चैत १३
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छड बनाउने कच्चा पदार्थ 'बिलेट' को मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा त्यसको असर देखिएको छ।
बिलेटको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ४० देखि ५० डलर वृद्धि भएपछि नेपालमा छडको कारखाना मूल्य प्रतिकेजी ३ रूपैयाँ बढेको नेपाल स्टिल तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण साखःले जानकारी दिए।
'केही महिनायता बिलेटको भाउ स्थिर छैन। त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ,' उपाध्यक्ष साखःले भने, 'मंगलबारदेखि प्रतिकेजी ३ रूपैयाँ बढेर कारखाना मूल्य ७८ रूपैयाँ कायम छ। यो भ्याट र बिक्रेताको नाफा बाहेकको भाउ हो।'
पञ्चकन्या स्टिलको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी ट्रेडका प्रोपाइटर दीपक पौडेलका अनुसार बिहीबारबाट सबै प्रकारका छडमा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा प्रतिकिलो ६ रूपैयाँ बढेको छ। उपभोक्ताले पहिले ७८ रूपैयाँ किलोमा किन्दै गरेको डन्डी बिहीबारबाट ८४ रूपैयाँ किलोमा किन्नु परेको छ।
त्यस्तै पञ्चकन्या स्टिलको मूल्य भने प्रतिकिलो १०१ रूपैयाँ पुगेको छ।
'कारखानाबाट मूल्य बढेपछि हामीले १३ प्रतिशत भ्याट, ढुवानी र नाफा जोड्छौं,' पौडेलले भने, 'सोही अनुसार उपभोक्ताले खरिद गर्दा सबै डन्डीमा ६ रूपैयाँ बढेको छ।'
एक हजार वर्गफिटमा बन्ने चार कोठाको एक तले घरमा कति छड लाग्छ?
कुनै पनि संरचना बनाउँदा त्यसमा राखिने पिलर, भित्रको पर्खाल आदिले छडको लागत निर्धारण हुने 'बिल्ड इनोभेसन'का निर्देशक तथा बिल्डिङ विशेषज्ञ इञ्जिनियर सुवास अधिकारी बताउँछन्।
जगसँगै राखिने बिममा १२ मिमिको डन्डी र ८ मिमिको रिङ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकारीका अनुसार यहाँ जम्मा छ सय बीस केजीभन्दा बढी डन्डी प्रयोग हुन्छ।
याद होस्, यहाँ एक हजार वर्गफिटमा बन्ने एकतले घरका लागि १२ वटा पिलर राखेर डन्डी मापन गरिएको छ। डिपिसी बिमका लागि पनि छ सय बीस केजीभन्दा बढी डन्डी प्रयोग हुन्छ।
यसपछि झ्यालमा तल र माथि गरी १० मिमिको डन्डी र हुक तीन सय केजीभन्दा बढी लाग्छ। यहाँ चार कोठे घरमा प्रति कोठा दुइटा झ्यालको हिसाब गरिएको छ।
भर्‍याङमा १२ मिमिको डन्डी प्रयोग हुन्छ। एक तला मात्रै घर बनाइने भएकाले लगभग नब्बे केजी लाग्छ।
छतमा सबभन्दा धेरै डन्डी प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ १० र ८ मिमिका डन्डी प्रयोग गरिन्छ। जम्मा छतका लागि करिव दुई हजार दुई सय केजी डन्डी लागत अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भएपछि पहिलो तलाका लागि डन्डीको मात्रा पूरा हुने अधिकारीले बताए।
माथिको लागत अनुमान अनुसार जगदेखि एकतले घरका लागि पाँच हजारदेखि छ हजार केजी डन्डी अनुमान गर्नुपर्छ। पहिलो तलामा जगको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले लागत बढी हुन्छ। दोश्रो तलामा तुलनात्मक रूपमा कम डन्डी लाग्छ।
मुख्य डन्डीबाहेक करिब एक सय पचास किलो 'बाइन्डिङ वायर' प्रयोग हुने उनले बताए। साथै डन्डीको आकार अनुसार मूल्य फरक पर्छ।
'८ मिमि र योभन्दा कम आकारको डन्डी सामान्यतया किलोमा पाँच रूपैयाँसम्म महँगो हुन्छ। २५ मिमिभन्दा मोटो डन्डीको मूल्य पनि बढी हुन्छ,' अधिकारीले भने, '१० मिमिदेखि २५ मिमिसम्मको डन्डी बजारमा समान्य मूल्यमा पाइन्छ।'
भाउ बढेसँगै विभिन्न कम्पनीका डन्डी करिब ८४ रूपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइन्छ। माथिको अनुपातलाई हालको मूल्यसँग तुलना गर्दा एक हजार वर्गफिटभन्दा कम क्षेत्रफलमा बन्ने एक तले घरका लागि करिब साढे चार लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँ छडमा खर्च हुन्छ।
पञ्चकन्या ग्रुपको डन्डी प्रयोग गर्ने हो भने माथिको करिब पाँच लाखदेखि छ लाख रूपैयाँसम्म लाग्छ। बजार मूल्य परिवर्तन हुँदा लागत स्वतः घटबढ हुन्छ।
माथिको जानकारी अनुसार डन्डी प्रयोग गर्दा दुई तलासम्मको घर बनाउन सकिन्छ। तर त्योभन्दा धेरै तला थप्नु जोखिम हुनाले इञ्जिनियरको सल्लाह लिनुपर्ने अधिकारीले जानकारी दिए।
यस्तो छड ८, १०, १२, २० मिमि लगायत आकारमा उपलब्ध हुन्छ। घर बनाउने जमिन र संरचनाका आधारमा इञ्जिनियरले सुझाएअनुसार विभिन्न आकारका छड प्रयोग गर्नुपर्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १३, २०७७, १७:२०:००